Jose Mourinho Oo Ka Dhaartay Laba Kooxood Iyo Laba Horyaal & Waqtiga Uu Shaqada Macallimo Kusoo Laabanayo Oo Uu Ka Hadlay - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaJose Mourinho Oo Ka Dhaartay Laba Kooxood Iyo Laba Horyaal & Waqtiga Uu Shaqada Macallimo Kusoo Laabanayo Oo Uu Ka Hadlay
Jose Mourinho Oo Ka Dhaartay Laba Kooxood Iyo Laba Horyaal & Waqtiga Uu Shaqada Macallimo Kusoo Laabanayo Oo Uu Ka Hadlay
May 1, 2021 Abdiwahab Ahmed Wararka Ciyaaraha Maanta, Wararka Premier League 1
Jose Mourinho ayaa daboolka ka qaaday, in shaqada tababarenimada kubadda cagta oo uu kusoo laabto xilli ciyaareedka dambe ay noqon karto ‘mid degdeg ah’, kaddib markii ay Tottenham dhowaan caydhisay.
Mulkiilaha Tottenham ee Daniel Levy, ayaa April 29 waxa uu go’aansaday in uu shaqada ka caydhiyo Jose Mourinho, kaddib markii ay kooxdaasi u degtay kaalinta toddobaad, waxaase ay kusoo beegantay maalmo ka hor finalka Carabao Cup oo ay Manchester City kaga qaadday 1-0, waxaana kulankaas tababare ku-meelgaadh ahaan usii maamulay Ryan Mason.
Jose Mourinho oo ay da’diisu tahay 58 jir ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu ku sheegay, in shaqada tababarenimada uu kusoo laaban doono, laakiin ay degdeg tahay in xilli ciyaareedka dambe bilowgiisaba uu kusoo laabto shaqada.
Waxa kale oo uu Mourinho meesha ka saaray, in laba horyaal uu marnaba tababare ka noqdo, waxaana uu kaliya niyadda ku hayaa in kooxo waaweyn uu layliyo.
Isagoo ka jawaabayay su’aal lga weydiiyey waqtiga uu qorshaynayo in uu soo laabto, waxa uu yidhi: “Wax qorshe ah kama lihi, waxa aan ku sugnaanayaa noloshayda caadiga ah. Waxa aan dareemayaa firfircooni, waxa aan dareemayaa degganaan. Waxa aan ku jiraa fasax.
“Waxa aan waqti badan u haystaa in aan qabsado shaqooyinkayga oo aan falanqeeyo (Waxa uu falanqeeye ka noqonayaa warbaahinta talkSPORT oo uu heshiis shaqo u saxeexay). Waxa aan sugi doonaa in aan kusoo laabto kubadda cagta. Maaha kooxda igu habboon, laakiin dhaqanka ugu saxsan.”
Mar la weydiiyey in waqtigu noqon karo xilli ciyaareedka dambe oo uu soo laabanayo, waxa uu yidhi: “Waxa laga yaabaa in xilli ciyaareedka dambe uu degdeg noqdo, waynu arki doonaa.”
Intaas kaddib ayuu sheegay labada horyaal iyo labada kooxood oo aanu tababare u noqonayn, waxaanu yidhi: “Germany iyo France, haddii aad tagto koox A (Bayern) ama koox B (PSG), waxa aad ogtahay in si degdeg ah loo qoray saldhiggaaga/aayahaaga (dhibaato la’aan aad iskaga joogayso). Laakiin England tartanka ayaa ah heerka ugu sarreeya. Aniga taas ayaa isoo jiidata.”
You funny lacib April 29 lee miya laa buriye